Vaovao - 2020 septambra Wenzhou International Optical Fair
Ny foara optika iraisam-pirenena Wenzhou faha-18 (WOF 2020) dia hatao ao amin'ny Ivotoerana Fivoriambe sy fampirantiana iraisam-pirenena Wenzhou manomboka ny 18 septambra hatramin'ny 20 septambra 2020!
Ny refin'ity fampirantiana ity dia hahatratra 30.200 metatra toradroa ny velaran'ny fampiratiana, miaraka amin'ireo orinasa 410 mahery avy any Guangzhou sy Shenzhen any Guangdong, Xiamen any Fujian, Danyang any Jiangsu, Xinhe any Hebei, Yujiang any Jiangxi, Rongchang any Chongqing, Cangxi any Sichuan, Linhai sy Yuhuan any Zhejiang, ary Ouhai any Wenzhou. Nivondrona ireo vondron'orinasa indostrialy toy ny Ruian sy Ruian ary niara-nanohana ny orinasa avy any Shanghai, Shaanxi, Ningbo, Zhejiang, Foshan, Guangdong ary ny toerana hafa.
Ny fampirantiana dia ahitana zana-kazo optika, solomaso, solomaso fanatanjahan-tena, solomaso ankizy, solomaso famakiana, solomaso sy banga, fonosana solomaso, fitaovana sy kojakoja ilaina ary fitaovana fanampiny, fitaovana manokana, fitaovana famokarana, fitaovana sy fitaovana optometry, solomaso mifandraika sy vokatra fikarakarana, fitaovana fitaratra fitaratra. ary ny fitaovana sns. Ny tranokala fampiratiana koa dia nanangana faritra fampisehoana ho an'ny mpamorona solomaso Shinoa sy vahiny, faritra aseho ho an'ny solomaso sy solomaso miaro, faritra fitaratra mivantana, ary faritra fanaovana asa ho an'ny mpijery hamoronana sehatra fifanakalozana fifandraisana matihanina amin'ny asa aman-draharaha ho an'ny indostrian'ny eyewear.
Taorian'ny fianjeran'ny indostrialy nandritra ny taona maro, Wenzhou International Optical Fair dia nanangona tahirin-kevitra momba ny mpividy be dia be, angon-drakitra fivarotana optika, angon-drakitry ny orinasa nasionaly, ary nanangona tahirin-kevitra lehibe ho an'ny mpividy ao amin'ny indostrian'ny optika nasionaly. Wenzhou International Optical Fair dia hampiasa antso an-tariby, hafatra an-tsoratra, mailaka, ary doka ivelany. , Dokam-barotra an-tserasera, fampiroboroboana ny haino aman-jery ary fantsona hafa hahatratra ny mpividy sy hanomezana fampirantiana ny fampifanarahana asa tena marina.
Nisy mpamorona sy marika tany am-boalohany avy any Italia, Alemana, Kanada, sns. Taorian'ny fizahana henjana dia nofidina ny vokatra famolavolana tsara indrindra nifanaraka tamin'ny fampirantiana mba hamoronana lanonana ara-pahitana amin'ny sehatra iraisam-pirenena.